Wasaaradda Maaliyadda oo bilowday in ay Dowlad Goboleedyada ka taageerto soo ururinta canshuuraha – Kalfadhi
Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya ayaa gadiid ay ugu talogashay in Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ay ku soo uruursadaan canshuurta waxay maanta ku wareejisay Jubbaland, Koofur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo Maamulka Gobolka Banaadir. Gaadiidkaas ayey Wasaaraddu sheegtay in ay ku dooneyso inuu kaalin ka qaato hormarinta dhaqaalaha guud ee dalka.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa warbaahinta u sheegay in lacag dhan $300,000 oo Doolar ay Wasaaraddu ugu talogashay in ay siiso 3-da Dowlad Goboleed ee kor ku xusan, “waxaana ay qiimaha lacagtaas ku qaateen” buu yiri “Gaadiid iyo qalabka kumbuyuutarada”.
“Inta badan goboladu waxay doorteen laba gaari iyo wixii soo hara oo IT ah” ayuu yiri Wasiir Beyle. “Halkaan waxa inala yaala todobo gaari weeye, todobadaas oo loo kala leeyahay saddex Hirshabeelle ah iyo laba-laba labada gobol ee kale ah (Koofur Galbeed iyo Jubbaland)” ayuu hadalkiisa raaciyey. Beyle waxa uu sheegay in ay sidaas oo kale u siin doonaan kaalmadaas Puntland iyo Galmudug.
Wasaaradaha Maaliyadda ee Dowlad Goboleedyada iyo Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya ayaa inta aan Dowlad Goboleedyada lagu wareejin gadiidkaas waxay kala saxiixdeen hishiis arrintaas la xiriira. “Waad og tihiin dowlad aan canshuur qaadin dowlad ma noqoto, anagana waxaa nalaga rabaa inaan gawaaridaan ku isticmaalno wixii loogu talogalay, oo ah in canshuurta lagu ururiyo” ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Hirshabeelle, Maxamed Maxamuud Cabdulle, oo ku hadlay afka Dowlad Goboleedyada kale.